Ireo “raha” izay manahirana antsika
"Ianareo … no efa nampihavaniny (nampihavanin’i Jesosy) ankehitriny, … mba hatolony ho masina sady tsy hanan-tsiny amam-pondro eo anatrehany, raha maharitra amin’ny finoana ianareo ka mafy orina sady tafatoetra." Kolosiana 1:21-23
"Fa raha velona araka ny nofo ianareo, dia tsy maintsy maty." Romana 8:13
Ambaran’ny Testamenta Vaovao mazava tsara ny fomba ahazoana famonjena: “Inona no mety hataoko, mba hovonjena aho? ... Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao” (Asan’ny Apostoly 16:31). Andriamanitra dia mamonjy izay mino, mamonjy azy maimaimpoana: “Fanomezana avy amin’Andriamanitra” izany (Efesiana 2:8). Andriamanitra no manambara izany, ary tsy mifanohitra na oviana na oviana izay lazainy.
Saingy rehefa avy namonjy antsika Andriamanitra, dia mametraka antsika manoloana ireo andraikitra takian’io famonjena io. Izany no ahitana ao amin’ny Baiboly ireo teny hoe “raha”, toy izay hitantsika ao amin’ireo andininy nomena antsika androany, izay toa mametraka fepetra mba hahavoavonjy. Mpino iza no afaka hiteny fa maharitra amin’ny finoana, “mafy orina sady tafatoetra”, isanandro? Aoka anefa tsy hanatsoaka hevitra avy amin’izany, hoe mety ho very ny famonjena.
Eritrereto hoe milalao eo amoron-drano ny zanako. Hentitra aho miteny aminy: “Raha milalao eo amorony loatra ianao, dia hianjera any anaty rano ka ho faty any”. Mampitandrina azy aho satria tiako izy, ary tena tsara ho azy ny mihaino ny teniko. Saingy heverinao ve fa hamela azy ho latsaka ao anaty rano sy ho faty ao aho, ka tsy hihetsika, satria hoe efa nampitandrina azy? Tsia dia tsia! Zanako io!
Toy izany koa no ataon’Andriamanitra amintsika mandrakariva, ary tsy miova Izy amin’izany. Aoka isika hihaino ireo fampitandremana ataony amin’ny maha Ray Azy. Nefa aoka tsy hokorontanin’ny fiheverana hoe ireo “raha” ireo dia mety hanafoana ny fahasoavan’Ilay Andriamanitra Avo Indrindra: namonjy antsika Izy. Raha hiankina, na dia kely aza, amin’izay mety ho fitondrantenantsika ny fananana antoka momba ny mandrakizay, dia hiahiahy hatrany isika.
Ny asa notanterahin’i Jesosy, ary izany ihany, no antoka ho antsika, isaorana anie Andriamanitra noho izany!